Magashule: Amaqabane azakuphendula kum ngoku | Ilisolezwe
Magashule: Amaqabane azakuphendula kum ngoku
Iindaba / 12 January 2018, 07:04am / Sithandiwe Velaphi
UNobhala weANC u-Ace Magashule ufota nelungu leANC kwikhaya lika-AB Xuma kuManzana eNgcobo
UNobhala Jikelele weANC uAce Magashule uthi wonke umthunywa weANC eburhulumenteni kuquka noMongameli welizwe uJacob Zuma uzakuphendula kuye xa kukho izinto ezingahambi kakuhle kurhulumente.
UMagashule ebethetha kwiHolo yoLuntu i-Indoor Sports Centre eNgcobo ngoLwesine, kwindibano yalo mbutho ehlakulela imibhiyozo yeminyaka elikhulu elinesithandathu yasekwayo iANC.
Ebalula ukubaluleka kokumamela iinkqubo zombutho, uMagashule uthi wonke umthunywa weANC unoxanduva lokukhokhelisa imidla yombutho kwiinkqubo zesirhulumente.
“Uceba kufuneka ayazi ukuba unoxanduva lokuphendula kwisebe lakhe ngokumayelana neenkqubo zesirhulumente athunywe kuzo. Akufanelanga ukuba ibelisebe elilandelana noceba. Kwankqu namalungu epalamente yephondo anoxanduva lokuphendula kunobhala weANC ephondweni. Mna lo buqu ndinalo igunya lokubuza umongameli welizwe (Zuma) ngezinto ezimayelana nemisebenzi ethwaliswe yena,” utshilo uMagashule.
UMagashule ukwaxelele amalungu eANC eNgcobo ukuba yena ebexhasa uNkosazana Dlamini-Zuma kwiphulo lobumongameli kwiANC.
“UDlamini-Zuma akaphumelelanga. UMongameli wethu omtsha nguCyril Ramaphosa ekufuneka ndimxhasile. Luxanduva lwethu sonke malungu eANC ukuba sixhase uRamaphosa,” utshilo uMagashule.
Phambi kokuya kuthetha eholweni eNgcobo, uMagashule utyelele usapho lowayesakuba nguMongameli weANC uGqirha Alfred Bitini Xuma owazalelwa kwilali yakuManzana eNgcobo, apho athe wabamba indibano nosapho lakwaXuma.
Kule ndibano, uMagashule uxelelwe ngokungoneliseki kolu sapho malunga nomfanekiso oqingqiweyo kaXuma okwidolophu yaseNgcobo.
Lo mfanekiso, nomi ecaleni komfanekiso kaWalter Sisulu, waqingqwa kwiminyaka emithathu edlulileyo kodwa awukavulwa ngokusesikweni. Ungavulwa nje kukuba usapho lakwaXuma lwathi luzakwamkela kuphela umntu okwinqanaba lobumongameli ukuze avule lo mfanekiso. UMagashule uthembise ngokuba oku kuzakwenzeka.